Detuo polygonal na Microstation site na Excel - Geofumadas
August, 2014 downloads, Microstation-Bentley, topografia
Iji template a, ị nwere ike ịdọta polygonal na Microstation, site na ndepụta nke bearings na anya na Excel, ma ọ bụ ndepụta nke nhazi x, y, z.
Ihe Nlekọta 1: Ndepụta Ntuziaka na Ọdịpụ
Ka e were ya na anyị nwere tebụl nke data na-abịa site n'ọhịa:
Na ogidi mbụ ị nwere ọdụ, mgbe ahụ, ebe dị anya na ebe ntụpọ abụọ na n'ikpeazụ ịba. Anyị chọrọ ịdọrọ polygon a, iji Microstation.
Maka ndị mere ya na ngwá ọrụ AccuDraw ha ga-aghọta na ọ bụ onye nzuzu, ọ bụghị naanị n'ihi na ngwá ọrụ ahụ nwere aghụghọ n'ihi na ọ bụ windo na-ese n'elu ma ọ bụkwa n'ihi na ọ bụla nhazi ga-abanye; ezighi ezi na ọnụọgụgụ, hapụ otu ma ọ bụ ghara ịtọgharịa iwu ahụ ga-amanye ịbanye data iji nyochaa ihe anyị mejọrọ.
Na nke a, anyị ga-eji ya na -emepụta Excel template, nke na-enye gị ohere ịbanye data n'ime igbe, ma nyezie ihe osise nke polygonal na Microstation.
Oge Anya Rumbo
1 - 2 29.53 N 21 Celsius 57 ' 15.04 » W
2 - 3 34.30 N 9 Celsius 20 ' 18.51 » W
3 - 4 19.67 N 16 Celsius 14 ' 20.41 » E
4 - 5 38.05 N 10 Celsius 59 ' 2.09 » E
5 - 6 52.80 S 89 Celsius 16 ' 30.23 » E
6 - 7 18.70 S 81 Celsius 43 ' 5.54 » E
7 - 8 15.18 N 46 Celsius 12 ' 23.79 » E
8 - 9 24.34 S 83 Celsius 34 ' 23.62 » E
9 - 10 17.87 S 76 Celsius 6 ' 49.78 » E
10 - 11 33.64 N 78 Celsius 38 ' 19.03 » E
11 - 12 17.05 N 88 Celsius 22 ' 24.25 » E
12 - 13 29.98 S 85 Celsius 34 ' 34.94 » E
36 - 37 21.79 N 69 Celsius 17 ' 35.24 » W
Olee otú Template si arụ ọrụ:
Site na template ha na-ejigide:
Ihe ndekọ data, ma ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ mbụ ka edere ya na template jupụtara na ogidi E na G.
Ebe dị anya na kọlụm H,
Isi ma ọ bụ data data. Ọ dịghị mkpa ịbanye akara maka ogo, nkeji ma ọ bụ sekọnd dịka usoro sel abanyegoro ya.
The template nwere nhọrọ ịhọrọ ọnụọgụ abụọ nke anyị na-atụ anya na a ga-ejigide ya; Cheta na ọ bụrụ na anyị na-eji ọnụọgụ abụọ, ọ ga-abụrịrị na ọhụụ ga-adị nso n'ihi na nkenke ga-efu na ọnụọgụ nke abụọ.
Template na-enye gị ohere ịhọrọ nhazi maka ebe izizi, iji nweta ọdịdị ihu. Ka anyị cheta na ọrụ ndị a n'ụdị a na-ebukarịkarị na theodolites, yabụ opekata mpe otu n'ime isi ihe niile nwere nhazi UTM.
A na-agbanye bọtịnụ bọtịnụ, ma dịka nsonaazụ na Microstation, anyị ga-enwe eriri polygon, dị ka e gosiri na vidiyo.
Ihe 2: ndepụta nhazi UTM
Template ahụ na-arụkwa ọrụ ma ọ bụrụ na ihe anyị nwere bụ ndepụta nke nhazi n'ụdị Aha, Ọwụwa Anyanwụ, Ugwu, Ogologo. Yana okpokoro ele mmadụ anya n'ihu nke egosiri n'okpuru.
Ọ na-arụ ọrụ maka ikpe abụọ ahụ. A ga-adọta traverse, na-agbakwunye nkọwa ma ọ bụ nọmba dị ka ederede na ntụgharị ọ bụla. Ọ ga-eji nha ederede, agba, ụdị font na nhazi nke eji na Microstation. Yabụ ọ bụrụ na o yighị anyị, a na-ewepụta ya ọzọ.
Template dị maka nbudata maka ego ọnụahịa. Anyị na-ekwukwa ihe atụ, n'ihi na maka ndị na-ebi ndụ na-edebanye aha ala ma ọ bụ topography iguanas na-eji Microstation, ha ga-echekwa ọtụtụ ọrụ.
Nweta ya Template na PayPal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Previous Post«Previous Otu esi mepee, kpọọ, ma kpoo faịlụ .shp na Microstation V8i
Next Post GVSIG gọọmentị ọhụrụ na weebụNext »
8 Azaghachi na "See polygonal na Microstation site na Excel"
July, 2019 na
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ọdụ ndị ọzọ,
Fanye ederede ị chọrọ, itinye ihe atụ n'etiti ahịrị 10 na 11
mgbe mbipụta nke zuru ezu e nyere ahịrị na-emetụ si ekpe nkụnye eji isi mee na mgbe mado ya n'ime ahịrị ị etinyere ọkacha mma gụnyere 10 11 na e nyere ahịrị na-eme ka formulas na yinye ga-aka iso.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, na ebe ọ bụ na ị nwetawo template ị nwere ike ịrịọ maka nkwado editor@geofumadas.com
Martín Santos Santillán kwuru, sị:
Ezi ụbọchị template anaghị ekwe ka m tinyekwuo ọdụ ụgbọ, ị nwere ike ịgwa m otu m ga esi tinye ha na-amasị gị, ma ọ bụrụ na i nwere ike inye ntụziaka ndị ọzọ
Ezigbo ụbọchị m nwetara template gị iji mee ka mpeebe polygonal mana ọ naghị ekwe ka m gbakwunyekwuo ahihia ị nwere ike ịgwa m otu esi tinyekwuo ọdụ ụgbọ ala biko.
Mba. Ederede na-arụ ọrụ naanị na Microstation.
arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka akara nkwekọrịta ma ọ bụ nchịkwa nkịtị?
Enwere m mpi mobile 6 nke m chọrọ ibudata ihe ụfọdụ, ma ejiri m ya na kọmputa m nke nwere windo 7 ma ghara ịma ya
Jenụwarị, 2015 na
Zitere m faili kacha mma, ya na data ị tinyegoro. Iji gosi ihe kpatara na ọ naghị abara gị uru.
nchịkọta akụkọ (na) geofumadas. com
kathya g kwuru, sị:
Enwere m template, edere ọdụ, ntụrụndụ, anya, na nhazi mbụ maka usoro ahụ, anaghị m ese ya, aghọtaghị m, x ihe.